“သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ မှတ်စု(၄) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » “သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ မှတ်စု(၄)	16
Posted by အဇဋာ on Jul 2, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
လက်တန်းဖြေနိုင်မယ့် မေးခွန်းမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ ရွေးပြီးမေးရပါတယ်။ တစ်ခုရှိသေးတာကအဲဒီလိုအပြေးအလွှားမေးခွန်းတွေ မေးနေတုန်းတစ်ခြားသတင်းထောက်တွေ သိထားပြီးတဲ့ မေးခွန်းမျိုး၊ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးသတင်းထောက်တစ်ယောက်ယောက်ကမေးမိရင်တော့၊ အချင်းချင်းအဟားခံရပါတယ်၊ ဒါတောင် မသိဘူးလားဆိုတဲ့ အထာနဲ့ပါ။]
နောက်နေ့မနက် ၅ နာရီလောက်ကတည်းအင်းစိန်ထောင်ရှေ့မှာသွားစောင့်နေရတယ်။ ကောင်မလေးကိုဘယ်ကချောကလက်ကျွေးနိုင်ပါ့မလဲဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာကိုကိုကြီးတို့၊ မင်းကိုနိုင်တို့ကျွေးမယ့်ချောကလက်ကိုပဲမျှော်နေရတယ်။ ဒီသတင်းကဂျာနယ်ရှေ့ဖုံး(Front Cover) မှာပါမှာကိုးဗျ။ ဘယ်အချိန်ထွက်လာမလဲတစ်မျှော်မျှော်နဲ့ပေါ့။ အင်းစိန်ထောင်ကနေလေယဉ်ကွင်းကိုသွား။ လေယဉ်ကွင်းမှာလေယဉ်နဲ့ပါလာမယ့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုတစ်နေ့လုံးစောင့်ရတယ်။ လေယဉ်တစ်စီးဆိုက်လာပြီဟေ့ဆိုရင် သတင်းထောက်တွေ တိုးလို့၊ ကြိတ်လို့ပေါ့ဗျာ။ သတင်းထောက် အယောက် ၁၀၀ လောက်ကြားထဲမှာတိုးလို့၊ ဝှေ့လို့။ ပြန်တွေးကြည့်ရင် ပျော်စရာကြီး။
၄ နာရီလောက်မှ ပြီးသွားတယ်။ အဲဒီကနေနောက်ဆုံးမင်းကိုနိုင်ကသူ့အိမ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ တောင်ဥက္ကလာမှာရှိတဲ့ သူ့အိမ်ကိုတန်းသွား။ သွားတာကတော့ တစ်ချို့ နာမည်ကြီးပြီး၊ ချမ်းသာတဲ့ ဂျာနယ်တိုက်ကသတင်းထောက်တွေကတော့ ဂျာနယ်တိုက်ကထုတ်ပေးထားတဲ့ ကားတွေနဲ့ တစ်နေရာနေတစ်နေရာကိုသွားကြတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်းသတင်းထောက်တွေစုပြီးတက္ကစီငှားပြီးသွားကြတယ်။သတင်းထောက်ဆိုတာကလည်းသတင်းတစ်ခုကြိုသိပြီဆိုရင် အဲဒီသတင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းက ကြိုရောက်နေမှ စိတ်ချမ်းသာတာဗျ။ အဲဒီလိုမရှိတဲ့ သတင်းထောက်ကျတော့လည်းသူများကားတွေနဲ့ ကားကြုံလိုက်ပေါ့ဗျာ။(မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော်ဆိုလေယဉ်ကွင်းမှာတုန်းက မြန်မာပို့စ်ကအစ်ကိုကြီးကျွေးတဲ့ မနက်စာစားပြီး၊ Messenger ဂျာနယ်ကကားနဲ့ ကားကြုံလိုက်ခဲ့တာ)။
နောက်တစ်ပတ်လောက်ထိကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ကိုအကျယ်ချုပ်ချထားတယ်။ ဘာမှလည်းမပြောဘူး။ ဖုန်းဆက်ရင် အင်း၊ဟင့်အင် အဲဒီနှစ်လုံးပဲပြောတယ်။ ၈၈ ကျောင်းသားတွေ လွတ်တဲ့သတင်းကလည်းစိစစ်ရေးထိတယ်။ (ခပ်တုံးတုံးဓါတ်ပုံလေး နှစ်ပုံနဲ့ စိစစ်ရေးကပြင်ဆင်၊ ပြုပြင်၊ ဖြတ်တောက်ပြီးသတင်းတိုတိုလေးတစ်ပုဒ်ပဲပါတယ်။ ခဲလေသမျှ သဲရေကျပါပဲ။)
သိပ်မကြာပါဘူးဗျာ။ နှစ်လလောက်ပါပဲ။ ကောင်မလေးလည်းဘယ်ခံနိုင်မလဲ။တစ်လမှာသူနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကသူတို့ ILBC ကျောင်းအားတဲ့ Sunday မှာ ကျွန်တော် သတင်းမရှိပါမှ တွေ့ကြရတာ။ အဲ…သတင်းထောက်ဆိုတာကလည်းသတင်းပေါ်အိပ်၊ သတင်းနားစားဆိုတော့(မြန်မာဗီဒီယိုတွေထဲကလို-“ရှင်…ကျွန်မနဲ့သတင်းဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်လဲ”လိုမျိုးမေးခွန်းတွေ ထွက်လာတော့တာပေါ့။ သတင်းထောက်တို့မျက်ရည် မြေမခစတမ်း။ လမ်းခွဲတစ်ခုမှာ ငြိမ်သက်ဆဲကိုယ်စီဒါဏ်ရာများနဲ့ ပေါ့ဗျာ။
အဇဋာ has written 27 post in this blog.
တွေးခေါ်ခြင်းကို ခုံမင်သူ၊ ဝေဖန်ခြင်းကို နှစ်သက်သူ၊
View all posts by အဇဋာ →	Blog
မြတ်ကျော်သူ says: ဒီပို့စ်နာမည်က
“သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ မှတ်စု(၄)” ဖြစ်ပါတယ်…
Title ပေးရန် သတိလွတ်သွားသည့်အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
မောင်ပေ says: ကိုမြတ်ကျော်သူရေ… ဖတ်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် သတင်းထောက်နေရာကို ရောက်သွားသလိုပါဘဲ ။ ကောင်မလေးက နားလည်မပေးပါလားလို့ လဲ ခံစားရတယ် ။ သတင်းထောက်အချင်းချင်းတွေ ဖလှယ်တဲ့ ရင်ခုန်သံတိုးတိုးလေးတွေကိုလဲ ဆက်ဖတ်နေမယ်ဗျို့ ..။
mamanoyar says: ရှင်…ကျွန်မနဲ့သတင်းဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်လဲ”
ပစ်စလက်ခတ် မျက်ရည် says: အိုင်အယ်လ်ဘီစီ က ဆိုပဲ ..ဖယားဖယား ….
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: သတင်းထောက်အချင်းချင်းချစ်သူတွေဖြစ်ကြရင်တော့………
၀မ်းတွင်းရူး says: အင် နာတို့ တောင်မသိလိုက်ဘူး။ILBC ကဗိုလ်မလေးကို မုန့် ကျွေးကြိုက်
MaMa says: ( သတင်းကိုသတင်းထောက်ကသစ္စမဖောက်ရဘူး။ )
ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးမှာ ၂ခုပြောချင်တယ်။
အဲဒီစာကြောင်းလေးဖတ်ပြီး သတင်းသမား၊ သတင်းထောက်ဆိုတာ လေးစားစရာပါလားလို့ မြင်မိတယ်။
(အဲဒီစာကြောင်းနဲ့ မကိုက်ညီသူတွေ မပါ)
နောက်တစ်ခုကတော့ တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားအရ ပြောရဦးမယ်။
သစ္စာ မှာ ရေးချ ကျန်ခဲ့တယ်။
ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲမို့ သတိပေးရခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်းးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1256
ရွာစားကျော် says: CJ ရူး ရူးနေသူများအတွက် တကယ့် ဗဟုသုတပါပဲဗျာ။ ရင်ကွဲခဲ့တဲ့သူကို အားနာလို့ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာပြောရမှာ တမျိုးကြီးပဲ..။ အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ။
၀မ်းတွင်းရူး says: သံတွဲသား အသည်းကွဲသတင်းထောက်ကြီးရေ ဗယာကြော်ပါဗျို့ —-အဲလေ—-
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2494
kyeemite says: ရွာထဲသတင်းသမားဖြစ်ချင်သူတွေ..အားလုံးအတွက်
ကြည်ဆောင်း says: (နောက်ရက်မှာတော့ အယ်ဒီတာနှင့်အဖွဲ့ကပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးလက်မှတ်သွားထိုးပြီးတော့၊နောက်တစ်ခါမလုပ်တော့ပါဘူးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့လုပ်တာပဲ)
ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုယ်လုပ်လိုက်ရလို့ ပျော်နေမဲ့ အယ်ဒီတာတွေမျက်နှာကိုမြင်ယောင်ရင်း . . . .
မွန်မွန် says: ဆယ်တန်းပြီးတော့ journalist သင်တန်း မတက်ဖြစ်တာပဲ မှန်တယ်ပြောရမယ်..မွန်မွန်သာဆို အဲဒီလို အပင်ပန်းခံနိုင်ပါ့မလား မသိဘူး .. ကိုမြတ်ကျော်သူရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6998
etone says: အကောင်းဆုံးကတော့ …. မိန်းမယူပြီးမှ သတင်းထောက်လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ .. ဟိဟိ… ။
ပြောမယ့်သာပြောရတာ .. တခြား နိုင်ငံမှာတော့ သတင်းထောက်တွေရော ၊သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေရော ၊ မီဒီယာရဲ့ အရေးပါမှုတွေရော … ဒီမှာ ထက်ပိုမယ်ထင်တယ်… ။ ဒီနိုင်ငံမှာ တချို့သော သတင်းထောက်တွေ သတင်းသွားယူရတာတောင် ကဒ်မကလို့ ဘာပဲပြပြ မျက်နှာငယ်ကြရတယ် ။ ဆက်လက်ဗရက်တီလိုဟာမျိုးနားကပ်ပြီး သူမဖြေချင်တာမျိုး မေးလိုက်မိရင် .. ပါးရိုက်ခံရတဲ့ သာဓကကလည်း ရှိသေးတယ်လေ ။ ဒီတော့ ….. သတင်းထောက်ဆိုတာ အတော်ကြီး ၀ါသနာပါမှ ဖြစ်တဲ့ အလုပ်မျိုးပါပဲ … ။ လူရော စိတ်ရော နှစ်ပြီး လုပ်ရတာမျိုးကြောင့်လေ … ။ ဒါပေမယ့်လည်း … ယနေ့ခေတ်မှာ လေသံကြား ဖမ်းတရား နာချင်တဲ့ သတင်းထောက်တွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပေါ်ပေါက်နေပါတယ် သတင်း အနံ့ ရတာနဲ့ …. အင်တာနက်ထဲ ဖလပ်ဖလပ်ဆိုတက်ရှာပြီး ကောက်ပရင့်လိုက်တာပဲ ….. ။ သတင်းထောက်စိတ်သာ တကယ်ရှိလျှင် … အဲ့လို လက်လွတ်စံပယ်မလုပ်သင့်ဘူး ။ ဟိုးတလောက ကျွန်မဆီတွေရောနှောတဲ့အကြောင်းရေးတယ် … ။ အဲ့ဒီပို့စ်ထဲမှာတင် တရုတ်က မြောင်းထဲက ဆီထုတ်တဲ့အကြောင်း ကျွန်မအီးမေးလ်မှာ နှစ်ပေါက်လောက်တဲ့ အချိန်က ရခဲ့ဖူးတာလေးပါ ပြန်ချရေးပြီး လင့်ပါတင်ရေးပေးတယ် …. မကြာလိုက်ပါဘူး … ဂျာနယ် တချို့မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ဆီပုံတွေပါလာလိုလာ … မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဆီတွေက တရုတ်ကလာတဲ့ ဟိုဆီတွေ ဖြစ်လိုဖြစ်နဲ့ .. အိမ်မှာ ထိုင်နေတဲ့လူကြီး သူမတွေနားထဲ အထိေ၇ာက်သွားတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ … ။ တကယ်ဆို ရယ်ချင်ပါတယ် ။ တရုတ်မှာ မြောင်းထဲက ဆီတွေထုတ်တဲ့အကြောင်း ရထားတဲ့ အီးမေးလ်တောင် တနှစ်ကျော်နေပါပြီ အခုမှ အဲ့ဒီပုံနဲ့စာတွေကို ကိုးကားပြီး ဂျာနယ်တချို့မှာ ထည့်ရေးတာ … တရေးနိုးလာတာများလားလို့ … သိချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ် အင်တာနက်ထဲက သတင်းတွေကို စီစစ်မှု မရှိပဲ ကူးတင်ပလိုက်တဲ့ အဖြစ်ပျက်တစ်ခုခု မှတ်မှတ်ရရဖတ်ခဲ့ဖူးသေးတယ် ဂျာနယ်ကိုတော့ နာမည်တပ်မပြောချင်ပါဘူး …. ပြည်တွင်းဂျာနယ်တစ်ခုမှာပါ … ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမပါတဲ့ လူသားလေ … ကိုယ်တပိုင်းကြီးပဲ ဆက်နေတာ ကျင်ငယ်၊ကြီးစွန့်လျှင် ကျန်တဲ့ ခန္ဓာတပိုင်းက ပါးစပ်က စွန့်ရတယ် … ဂျာနယ်ထဲမှာတော့ ကံကံဧ။် အကျိုး ဘာညာစသဖြင့် ပွားတယ်ပေါ့ .. နောက်မှ သိလိုက်တာ .. အင်တာနက်ထဲက … Hoax ပါတဲ့ .. ဟိဟိ … တကယ့်သတင်းထောက်တွေကိုတော့ လေးစားပါတယ် … ဒီကြားထဲမှာ သတင်းဖြစ်လျှင် ပြီးရောဆိုပြီးတင်နေတဲ့ …. စုန်းပြူးတွေလည်း ကြားညှပ်ပါနေတယ်ဆိုတာလေး သိစေချင်လို့ပါ ။ ကျွန်မအစ်ကိုလည်း ပြည်တွင်းဂျာနယ်နဲ့ မဂ္ဂဇင်း တချို့မှာ ရေးနေတဲ့ သတင်းထောက်ပါပဲ … ။ အ လုပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် မိသားစုတွင်း ခဏခဏ စကားများရတယ် ၊ မိန်းမနဲ့ခဏခဏ ကွိုင်ပတ်ရတယ် …. ။ ဒါပေမယ့်လည်း … ၀ါသနာအရလုပ်တဲ့ သူ့အလုပ် … ဘယ်တော့မှ … ချမ်းသာတယ်ကို မရှိတာ မျက်မြင်ပါပဲ … ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1605
မွန်မွန် says:ုဟုတ်ပါ့ အစ်မရယ်..မွန်မွန်လည်း ထူးဆန်းနေတာ (ကိုထူးဆန်း မဟုတ်)။ အခုမှ ဒီကိစ္စက ဂျာနယ်ထဲမှာ ခေတ်စားလာတာပါလိမ့်လို့… တစ်ခါတစ်လေ မေးလ်ကရတာတွေကို ဂျာနယ်ထဲမှာ ထည့်တာ တွေ့မိတယ်… ဒီတစ်ခါတော့ အသေအချာ မှတ်ထားတော့မယ်… ပြီးရင် ပြန်ဖွမယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 96
မြတ်ကျော်သူ says: ဟုတ်ပါတယ်..etone ရေ…အဲဒီလို သတင်းထောက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်…
ဒိထက်ဆိုးတဲ့ သတင်းထောက်တွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး…
အဲဒီအကြောင်းတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ရေးသွားဖို့ ကျွန်တော် စိတ်ကူးထားပါတယ်…
စုန်းပြူးတွေကိုတော့ ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဗျာ…သူတို့က နေရာတကာတိုင်းမှာရှိနေတာဆိုတော့…
etone says: ဟုတ်ကဲ့ ကိုမြတ်ကျော်သူရေ ..အားပေးလို့ စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ။